Helitaanka tamarta la cusbooneysiin karo ee la-qabsiga cimilada Afrika: madaxa UN - Wardeeq 24 TV Helitaanka tamarta la cusbooneysiin karo ee la-qabsiga cimilada Afrika: madaxa UN Wardeeq 24 TV
Home Xulashada Helitaanka tamarta la cusbooneysiin karo ee la-qabsiga cimilada Afrika: madaxa UN
Helitaanka tamarta la cusbooneysiin karo ee la-qabsiga cimilada Afrika: madaxa UN
“Maadaama ay tahay qaaraddii wax ka tartay dhibaatada cimilada, Afrika waxay u qalantaa taageerada ugu badan ee suurtogalka ah iyo midnimo”, ayuu u sheegay wadahadal khadka tooska ah loogu talagalay hoggaamiyeyaasha uu soo abaabulay Bangiga Horumarinta Afrika.
Mr. Guterres wuxuu ka digay “la qabsiga waa inuusan noqon nus ka mid ah isle’egta cimilada ee la dayacay”.
In kasta oo Afrika ay leedahay kheyraad badan oo aan la cusbooneysiin karin, haddana waxay heshay boqolkiiba laba keliya maalgashiga caalamiga ah ee tamarta la cusboonaysiin karo tobankii sano ee la soo dhaafay, ayuu yiri.
Moodaaladii hore ee horumarka iyo isticmaalka tamarta ayaa ku guuldareystay inay dadka Afrikaanka ah ka helaan fursad ay ku helaan tamarta guud, ayuu yiri, taasoo la micno ah in boqolaal milyan oo dad ah ay weli ka maqan yihiin koronto la isku halleyn karo oo la awoodi karo ama ay wax ku karsanayaan wasakhda iyo shidaalka waxyeellada leh.
“Waxaan ku bixin karnaa helitaanka guud ee tamarta Afrika ugu horreyntii iyada oo loo marayo tamarta la cusbooneysiin karo. Waxaan ku baaqayaa xirmo taageero oo dhameystiran si loo gaaro himiladaan ka hor COP26, ”ayuu yiri Mr. Guterres, isagoo tixraacaya shirkii isbeddelka cimilada ee Qaramada Midoobay ee dhacay bishii Nofeembar.
“Waa mid la gaari karo. Waa lagama maarmaan. Waa laga soo daahay Waana wax caqli gal ah: ficil-celinta cimilada ayaa ah $ 3 trillion oo maalgashi oo Afrika ah 2030, ”ayuu raaciyay.
‘Farqiga weyn ee maaliyadeed’
Si kastaba ha noqotee, Xoghayaha Guud wuxuu tilmaamay “farqiga ugu weyn ee dhaqaalaha” farqiga ka hortaagan horumarka hadafkan. Wuxuu ku booriyay wadamada horumaray inay bixiyaan 100-ka bilyan ee doolar ee balanqaadka cimilada ee ay sameeyeen toban sano ka hor.
“Wadamada horumaray iyo maal galiyaasha waaweyn waa inay hubiyaan in balaayiin deg deg ah loo taageero maalgashiga cagaaran ee Afrika, si loo kordhiyo adkeysiga iyo in la abuuro xaalado lagu kobciyo dhaqaalaha gaarka loo leeyahay,” ayuu yiri.
“Waa in waaxda gaarka loo leeyahay ay dardar geliyaan oo ay is abaabulaan si ay u siiyaan xal deg deg ah oo wax ku ool ah dawladaha. Maamulada maxalliga ah waxay la shaqeyn karaan ururada shaqaalaha iyo hoggaamiyeyaasha bulshada xagga dib-u-sameynta iyo shabagyada badbaadada bulshada. ”
Ballanqaad iyo ismaamul maaliyadeed
In kasta oo Dawladaha Afrika sidoo kale ay ku hoggaamin karaan jidka iyaga oo u hoggaansamaya qorshooyin la qabsi iyo yareyn, haddana waxay marka hore u baahan yihiin inay dib ula soo noqdaan madax-bannaanidooda maaliyadeed, ayuu yidhi.
Xoghayaha guud wuxuu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la kordhiyo joojinta deynta ee dalalka soo koraya, oo la sameeyay sanadkii la soo dhaafay iyadoo laga jawaabayo cudurka faafa ee COVID-19, iyo xitaa in laga joojiyo deynta halka ay ku habboon tahay.
Intaa waxaa sii dheer, Xuquuqda Sawirka Gaarka ah, oo ah nooc kayd ajnabi oo dheeri ah oo ay hayso Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF), waa in sidoo kale la diyaariyaa si loo taageero dib u soo kabashada Afrika.
Previous articleSiyaasadda, amniga, xuquuqda aadanaha iyo caqabadaha bani’aadamnimo ’ayaa ku habsaday Mali
Next articleCOVID-19: Faa’iidooyinka tallaalka AstraZeneca weli ‘badanaa waa wanaagsan yihiin’